Izindatshana zikaJessica Bruce zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UJessica Bruce
Indlela enhle yemikhiqizo yokunikeza amadili akhangayo kubathengi ukusika abalamuli. Okungaphansi kwe-go-betweens, kuncane izindleko zokuthenga zabathengi. Asikho isixazululo esingcono sokwenza lokhu kunokuxhumana nabathengi nge-inthanethi. Ngabasebenzisi be-Smartphones abayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.53 nezigidi zamakhompyutha abo, kanye nezitolo eziyizigidi eziyi-12-24 ze-eCommerce, abathengi abasanciki ezitolo ezidayisa ngokomzimba ukuthenga. Eqinisweni, i-digital